मेसीले जिते छैटौं पल्ट बेलन डे अर- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
मंसिर १७, २०७६ बिनु सुवेदी
काठमाडौँ — नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंसिर अन्तिम साता चीन भ्रमणमा जाने आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आइतबार यही विषयमा छलफल गरेपछि सोमबार दाहालले पूर्वानिर्धारित कार्यतालिका संशोधन गरेका हुन् ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेकपाको उच्चस्तरीय टोली तत्काल चीन भ्रमणमा जाने समझदारी भएको थियो । त्यही समझदारीअनुसार दाहाल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवसमेत रहेका राष्ट्रपति सीकै चाहनामा चीन जान लागेका थिए ।
नेकपा स्कुल विभागका उपप्रमुखद्वय वेदुराम भुसाल र देवेन्द्र पौडेलसहितको टोली असोज २८ गते चीन पुगेर फर्कियो । करिब एक साता चीन बसेको उक्त टोलीले चीनको गरिबी निवारण, सी विचारधारालगायत विषयमा अध्ययन गर्‍यो । यही समयमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि टोलीसहित चीनमै अध्ययन भ्रमणमा थिए । केन्द्रीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको छुट्टाछुट्टै टोलीले चीनको लगातार भ्रमण गरिरहेको छ । कतिपय जाने पालो कुरेर बसेका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपाबीच असोज ७ गते भएको समझदारीमा सम्बन्ध विस्तारका लागि आपसी भ्रमण बढाउने सहमति भएको थियो । समझदारीमा भ्रमण आदानप्रदान गराउने, वैचारिक र राजनीतिक छलफल बढाउने, दुवै कम्युनिस्ट पार्टीका सिद्धान्तबारे जानकारी गराउनेलगायत विषय थियो ।
के हुन्छ चीनमा ?
चिनियाँ अधिकारीले नेपालबाट राजनीतिक भ्रमणमा जानेहरूलाई मुख्यतः आफ्नो विकासको मोडल देखाउँछन् । राष्ट्रपति सीले अघि सारेको ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ को सैद्धान्तिक व्याख्या सुनाउँछन् र चीनले पछिल्लो समय गरेको प्रविधिको विकासको बखान गर्छन् । ‘उनीहरूले आफ्नो विकासको मोडेल नै देखाउने हुन्,’ हालसालै चीनबाट फर्किएका नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले भने, ‘त्यहाँको सहरी क्षेत्रको विकासबारे हामीले धेरै कुरा जानेर फर्कियौं ।’ उनले त्यहाँ आफूहरूलाई दिनको छ घण्टा क्लासमै राखेर पढाएको जानकारी दिए ।
नगरपालिकाहरूको विकासको मोडेलबारे अनुभव आदानप्रदान गर्न चीनका विभिन्न नगरपालिका र नेपालका नगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्धमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । चिनियाँले व्यक्तिको पृष्ठभूमिको आधारमा पनि आफ्ना अनुभव साटासाट गर्दै आएको नेकपा स्कुल विभाग उपप्रमुख बेदुराम भुसालको भनाइ छ । आफ्नो भ्रमणका क्रममा त्यहाँको विकास, गरिबी निवारणका लागि खेलेको भूमिका र गरेको प्रगतिका विषयमा चीनका प्रतिनिधिले जानकारी गराएको उनले बताए । ‘यसबाहेक हामीले चिनियाँ विशेषताको समाजवाद र सी विचारधाराको भूमिकाबारे पनि छलफल गर्‍यौं र जानकारी लियौं,’ भुसालले भने, ‘चीनले नेपाली मात्रै होइन, अरू विदेशीलाई पनि उत्तिकै निम्त्याउँदो रहेछ ।’
चीनले किन यति धेरै भ्रमण गराउँदै आएको छ त ? चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत टंक कार्कीले भने, ‘आफूले तीव्र गतिमा गरेको विकास बाहिरी दुनियाँलाई देखाउने चाहना नै मुख्य हो ।’ उनले छिमेकी मुलुकले गरिरहेको विकास बुझ्न जाने प्रक्रिया बढ्नुलाई अन्यथा सोच्न नहुने बताए । ‘चीन नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएपछि सुनेको कहानी आफैं हेरौं न त भन्ने हाम्रै पनि सोच हुन्छ नि,’ उनले भने ।
कार्कीले अरू देशसँगको आफ्नो सम्बन्ध जनस्तरसम्मै होस् भन्ने चीनको नयाँ नीतिका कारण पनि उसले जतिसक्दो धेरै नेपालीलाई चीन लगेको हुनसक्ने बताए । राजनीतिक दल, व्यक्तिगत तथा संस्थागत सम्बन्धबाहेक पनि बर्सेनि सरकारी कोटामा चीन जानेको संख्या छुट्टै छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चीनले दुईपक्षीय सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक ८ सयको हाराहारीमा छोटो अध्ययनका लागि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई चीन लैजाने गरेको छ । नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ नागरिकको संख्या पनि अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा बढेर १ लाख ४२ हजार कटेको अध्यागमन विभागको रेकर्डमा छ ।
प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०७:२६